काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड बिरामी कुन अस्पतालमा कति ? - Pariwartan Khabar Pariwartan Khabar
29 April, 2021 8:20 am
राजधानीका धेरैजसो अस्पतालमा कोभिडका नयाँ बिरामीलाई सहजै भर्ना गरेर उपचार गर्न सकिने अवस्था छैन । कोभिड बिरामीका लागि छुट्याइएका सबै शय्या भरिइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार दिनहुँ जटिल प्रकारका संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले चाप थेग्न राजधानीमा तत्काल करिब हजार शय्याभन्दा बढीको अक्सिजनसहित उपचार दिन सकिने अस्थायी अस्पताल आवश्यक भइसकेको छ । सिकिस्त बिरामी बढिरहेकाले केही अस्पतालले थप बिरामीलाई सेवा दिन क्षमता विस्तारको तयारी थालेका छन् । हाल उपत्यकाका अस्पतालमा सामान्य अक्सिजनसहितको बेड पाउन कोभिडका बिरामी लाममा बस्नुपर्ने अवस्था छ । ‘बेड निकाल्न सकिएको छैन, ३–४ जना क्यूमा छन्, कोभिड पोजिटिभ बेड नपाएर इमर्जेन्सी, ट्रान्जिट वार्डमा छन्,’ वीर अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. अच्युतराज कार्कीले भने, ‘तत्काल नयाँ बिरामी लिन सकिने स्थिति छैन ।’
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा। दिनेश काफ्लेले अस्पतालमा कोभिड र ननकोभिड बिरामीका लागि थप शय्या राख्ने तयारी भएको जानकारी दिए । हाल शिक्षण अस्पतालमा आईसीयू, हाइडिपेन्डेन्सी युनिट ९एचडीयू०, अब्जरभेसन, कोभिड इमर्जेन्सीसहित १४० कोभिड बिरामीका लागि डेडिकेटेड बेड बनाइएको छ । शिक्षणले तयार गरेका ‘एचडीयू’ दुई दिनमै भरिएको डा। काफ्लेले जनाए । ‘अवस्था गम्भीर छ, जुन संख्यामा बिरामी आइरहेका छन्, त्यसअनुसार द्रुत गतिमा थप उपचार व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने ।
कोभिड बिरामीका लागि उपचार प्रक्रियाअन्तर्गत जनशक्ति, सप्लाई चेन, अक्सिजनलगायत थप व्यवस्था आवश्यक भएको उनले औंल्याए । ‘१२ बेडको आईसीयूमा २४ घण्टामा १२० वटा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण ९पीपीई० चाहिन्छ, आईसीयूमा अचेत बिरामीलाई दुई–दुई घण्टामा पल्टाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार मंगलबार देशभरिमा कोभिडका ३१५ जना बिरामी आईसीयूमा र ८४ जना भेन्टिलेटरमा गरी ३९९ जना सघन उपचारमा छन् । काठमाडौं उपत्यकामै १११ जना आईसीयू र ४५ जना भेन्टिलेटरमा गरी १५७ जना सघन उपचारमा छन् । यो मुलुकभरिमा सघन उपचारमा रहेका कोभिड बिरामीको ३९.३४ प्रतिशत हो ।